I-Pecan Acres Ranch - I-Airbnb
I-Pecan Acres Ranch
Lone Oak, Texas, i-United States
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Melanie
Ikhaya elihle lezwe imizuzu emi-5 kuphela ukusuka eLake Tawakoni. Letha wonke umndeni futhi ujabulele ukudoba echibini, umdlalo wezicathulo zamahhashi ngenkathi upheka eduze kovulandi omkhulu wokugoqa, noma phumula nekhofi lakho futhi ubuke ukuphuma kwelanga ngokuthula.Ihora kuphela ukusuka e-Dallas, kodwa kuwufanele ukushayela ngokuthula nokuthula. Indawo yokupaka izikebhe kanye nesiteshi sokuhlanza izinhlanzi endaweni.Ilungele lolo hambo lokudoba oselulindelwe !! Ngemicimbi engaphezu kuka-8 kanye/noma izilwane ezifuywayo sicela usithinte, njengoba kungasebenza izindleko ezengeziwe/amadiphozithi.
Ikhishi elikhulu, igrill yegesi yangaphandle, i-TV egumbini ngalinye, ukugeza oku-master okukhulu okunamakhanda angu-2 okugeza, imoto emboziwe nendawo yokupaka izikebhe, indawo yokuhlanza izinhlanzi, enkulu ebiyelwe egcekeni yalezo zilwane ezifuywayo zangaphandle, imidlalo yangaphandle kanye nechibi elikhulu lomndeni wonke. ukujabulela. Sicela uqaphele- leli yikhaya lezwe elizungezwe amahektha angama-40 ezilwane zasendle.
imibhede yomoya engu- 2
4.95 · 115 okushiwo abanye
Amamayela angu-4 ukusuka eLake Tawakoni, amamayela angu-21 ukuya eLake Fork, amamayela angu-15 ukuya eGreenville, amamayela angu-38 ukuya eCanton Ukuthenga uMsombuluko wokuqala, ihora elingu-1 kuphela ukuya eDallas.
Married couple who love hospitality and live only 1 mile from home.
Umnikazi uhlala endaweni futhi uzotholakala ngocingo uma kudingeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Lone Oak namaphethelo